जापानमा जनावरहरू !! सर्वश्रेष्ठ स्पटहरू जुन तपाईं उनीहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ - Best of Japan
नागानो प्रान्त र होक्काइडोमा त्यहाँ स्थानहरू छन् जहाँ बाँदरहरू तातो स्प्रि .हरूमा प्रवेश गर्छन्
२० जापानमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू र आरक्षण कसरी गर्ने >
जापानमा जनावरहरू !! सर्वश्रेष्ठ स्पटहरू तपाईं तिनीहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाईंलाई जनावरहरू मनपर्दछ भने, किन तपाईं जापानमा जनावरहरूसँग खेल्न सक्नुहुने दर्शनीय ठाउँहरू भ्रमण गर्नुहुन्न? जापानमा, त्यहाँ उल्लू, बिरालो, खरायो, र मृग जस्ता विभिन्न जनावरहरूसँग खेल्ने ठाउँहरू छन्। यस पृष्ठमा, म ती स्थानहरूमा लोकप्रिय स्थानहरूको परिचय दिनेछु। प्रत्येक नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्, गुगल नक्शा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
फोटोहरू: अकिता कुकुर (अकिता इनू) - के तपाईंलाई शिबुयामा "हची" थाहा छ?
के तपाई अकिता कुकुर (अकिता इनू) लाई चिन्नुहुन्छ? अकिता कुकुर एक ठूलो कुकुर हो जुन लामो समयदेखि जापानको तोहोकु क्षेत्रमा शिकार गर्दै आएको थियो। अकिता डग अत्यधिक वफादारको लागि प्रसिद्ध छ। टोकियोको शिबुयामा हावाको पार गर्ने ठाउँको अगाडि, त्यहाँ एक मूर्ति ...
असाहिमा चिड़ियाघर (असाहिकावा क्री, होक्काइडो)
ताशिरोजिमा = बिरालो द्वीप (ईशिनोमाकी शहर, मियागी प्रान्त)
जाओ फक्स गाउँ (शिरोशी शहर, मियागी प्रान्त)
उल्लू क्याफे (टोकियो आदि)
हेजहोग क्याफे (टोक्यो आदि)
Jigokudani Yaen-koen - हिउँ बाँदर (नागानो प्रान्त)
नारा पार्क = हिरण (नारा शहर, नारा प्रान्त)
Okunoshima टापु = खरायो (हिरोशिमा प्रान्त)
ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियम (ओकिनावा प्रान्त)
जापान मा Asahiyama चिडियाखाना मा पेन्गुइन परेड = शटरस्टक
Arashiyama चिडियाखाना को नक्शा
के तपाईंले कहिल्यै सिल डार्टि or वा ठाडो उकालो देख्नुभएको छ? के तपाईंले कहिल्यै ध्रुवीय भालु आश्चर्यजनक गतिको साथ पोखरीमा उफ्रँदै गरेको देख्नु भएको छ? होकाइडो, असाहिकावा शहरको असाहियामा चिडियाखानामा, तपाईं समक्ष यी जनावरहरूको सामान्य रूप देख्न सक्नुहुन्छ। असाहिमा चिडियाखाना एउटा चिडियाखाना हो कि धेरै डिजाइन गरिएको छ ताकि तपाईं जनावरहरूको उत्साहजनक दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यो चिडियाखाना पर्यटक आकर्षण हो जो होक्काइडोको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जाडोमा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ केही प्यारा पेंगुइन हिउँ परिरहेको छ र माथिको फोटोमा!
>> Asahiyama चिडियाखाना को विवरणको लागि कृपया यस साइट भ्रमण गर्नुहोस्
इशिनोमाकी, मियागी, जापानमा "क्याट टापु" भनेर चिनिने टाशिरोजीमा बिरालाहरू, जापान = एडोबस्टक
ताशिरोजिमा को नक्शा
ताशिरो टापु ११ किलोमिटर / एलको सानो टापु हो, इशिनोमाकी बन्दरगाह मियागी प्रान्तको इशिनोमाकी बन्दरगाहबाट करीव १ 11 किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित छ। यस टापुको बीचमा एउटा "बिराला मन्दिर" छ। यस टापुका माछावालाहरू यस मन्दिरमा ठूलो पक्राऊको लागि प्रार्थना गर्छन्। यस टापुका मानिसहरूले बिरालाहरूलाई धेरै महत्त्व दिन्छन्। यस टापुमा एकपटक सेरीकल्चर फस्टाउँदै थियो। बिरालाहरूले चूहहरू समात्छन् जो रेशमका कीराका प्राकृतिक शत्रुहरू हुन्। त्यसैले यस टापुका मानिसहरूले बिरालाहरूको कदर गर्दछन्। यस टापुमा बिरालाहरू मानिस भन्दा धेरै असंख्य छन्। यस टापुमा कुकुरहरू ल्याउन निषेध गरिएको छ। बिरालाहरूको लागि, ताशिरो टापु पक्कै पनि स्वर्ग जस्तो ठाँउ हो। तशिरोजिमा टापुको लागि इशिनोमाकी पोर्टबाट फेरीमा 15 45 मिनेट जति छ।
>> बिरालो टापुको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया यो साइट भ्रमण गर्नुहोस्
जाउँ फक्स गाउँ, मियागी, जापान = शटरस्टकमा जाडो हिउँमा प्यारो रातो फ्याक्स
जाओ फक्स गाउँको नक्शा
जाओ फक्स गाउँमा करीव २ 250० स्यालहरू छन् (आधिकारिक नाम मियागी जाओ फक्स गाउँ हो)। ती मध्ये १०० भन्दा बढि ज released्गलमा छोडिन्छ। यस गाउँमा स्यालहरू मानवको लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाईं यस जंगलमा स्यालहरूलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, स्याललाई चाउने बानी हुन्छ जब तपाईं तिनीहरूलाई बाहिर पठाउनुहुन्छ, तपाईं जंगलमा स्याललाई समात्न सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा, सियार गाउँमा ठाउँहरू छन् जहाँ आगन्तुकहरूले स्यालहरूलाई खुवाउन सक्छन्। आगन्तुकहरूले बाहिरी फ्याक्साहरूलाई एन्क्लोजर भित्रबाट फिड गर्छन्। जाओ फक्स गाउँमा अर्को कुनामा छ जहाँ तपाईं स्यालहरूको बच्चाहरू अँगाल्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ हरेक वर्ष मेको वरिपरि नवजात स्याललाई अंगाल्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू धेरै प्यारा छन्!
स्यालहरू वसन्त देखि शरद toतुमा स्मार्ट छन्, तर जब जाडो नजिक आउँछ, फर समृद्ध हुन्छ। यदि तपाईं जनवरी वा फेब्रुअरीमा जाओ फक्स गाउँ जानुहुन्छ, तपाईं धेरै फर धनी स्यालहरू देख्न सक्नुहुन्छ!
झाओ फक्स गाउँ जेआर शिरोशिओकाओ स्टेशनबाट २० मिनेट कारमा अवस्थित छ। जेआर शिरोशी स्टेशनबाट बस प्रयोग गर्न १ घण्टा लाग्छ।
>> विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
अकिहाबरा उल्लू क्याफेमा घीलाई हेर्दै। टोक्यो, जापान = शटरस्टक
Owlcafe अकिबा फुकुरो को नक्शा
जापानमा उल्लू क्याफेहरूको बृद्धि भइरहेको छ। धेरै उल्लू क्याफेहरूमा उल्लू कोठामा राखिन्छन्। आगन्तुकहरूले घुँडा टेक्ने बित्तिकै घुमाउन सक्छन् र उनीहरूको साथ तस्वीर लिन सक्दछन्। यसमा क्याफेको नाम छ, तर त्यहाँ केहि ठाउँहरू छन् वास्तवमा कफी आदि प्रदान गर्नका लागि।
एक विशिष्ट उल्लू क्याफे "अकिबा फुकुरो" हो। यो क्याफे अकिहाबरा, टोकियो मा अवस्थित छ। अकिबा फुकुरोमा धेरै प्रकारका उल्लूहरू छन्। म वास्तवमै यस क्याफेमा भएको छु। कोठाको भित्री भाग अप्रत्याशित रूपमा साँघुरो थियो। यद्यपि, विभिन्न प्रकारका उल्लूले मलाई कल्पना गरेको भन्दा बढि अभिवादन गरे। ती अद्भुत छन्। उल्लूहरू साँच्चिकै प्यारो छन, त्यसैले म उल्लूहरूले च he्गाई गरे। अकिबा फुकुरोको आधिकारिक वेबसाइट तल छ। यस क्याफेका लागि आरक्षणहरू आवश्यक छ।
>> अकिबा फुकुरो
Hedgehogs कोमल छन्
तपाईं हेजहोगहरू छुनुहोस्
उल्लू बाहेक, टोकियोमा विभिन्न जनावरहरू सहित क्याफेहरू छन्। ती मध्ये, हेजहगहरूको साथ क्याफेहरू हालसालै लोकप्रिय भएका छन्।
यी क्याफेहरूमा, तपाईं प्यारा हेजहोगहरू छुन सक्नुहुनेछ। हेजेजहरू तपाईंको हथेलीमा आरामसँग सुत्न सक्दछन्।
त्यहाँ पसलहरू छन् जहाँ तपाईं हेजहगहरू खुवाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले हेजहोग्सलाई खुवाउनुभयो भने, हेजहोग्स खुसी हुनेछन्। तपाईं पक्कै राम्रो चित्र लिन सक्नुहुन्छ।
यी क्याफेहरू यती लोकप्रिय छन् कि मेरो सिफारिश छ कि तपाईं अग्रिम आरक्षण गर्नुहोस्। स्टोर स्टोरमा निर्भर रहँदा मूल्य भिन्न हुन्छ, तर यो पेय मूल्यसहित 1500० मिनेटमा १30०० येनको आसपास हुन्छ।
सब भन्दा लोकप्रिय स्टोरहरू "HARRY" हुन्, जो रोपपन्गी र हाराजुकु, टोकियोमा अवस्थित छन्। तपाईले "HARRY" को आधिकारिक साइटमा पनि आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि कृपया आधिकारिक साइट हेर्नुहोस्।
>> "HARRY" आधिकारिक साइट यहाँ छ
हिगो बाँदरहरू प्राकृतिक ओन्सेन (तातो वसन्त) मा, Jigokudani पार्क, Yudanaka मा अवस्थित। नागानो जापान
Jigokudani Yaen-koen को नक्शा
फोटोहरू: Jigokudani Yaen-koen - नागानो प्रान्तमा हिउँ बाँदर
जापानमा, बाँदरहरू र जापानीहरू तातो स्प्रि loveहरू मन पराउँछन्। केन्द्रीय होन्शुको नागानो प्रान्तको पर्वतीय क्षेत्रमा, त्यहाँ एक "तातो वसन्त रिसोर्ट" छ जुन जिगोकोदानी याएन-कोइन भनिन्छ। बाँदरहरूले तातो हिउँदमा यस गर्मी वसन्तमा उनीहरूको शरीर तातो पार्दछन्। यदि तपाईं Jigokudani जानुहुन्छ ...
जिगोोकुदानी याएन-कोयन एक पार्क हो जहाँ तपाईं वन्य बाँदरहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यस पार्कको बाहिरी नुहाउने ठाउँ छ जहाँ बाँदरहरू प्रवेश गर्छन्। करीव १ 60० वटा बाँदरहरू हरेक वर्ष डिसेम्बरदेखि मार्चसम्म तातो स्प्रि enterमा प्रवेश गर्छन्। बाँदरहरू हामीमा खासै चासो राख्दैनन्। तसर्थ, हामी तातो स्प्रि intoहरूमा बन्दरको प्रवेश नजिकबाट अवलोकन गर्न सक्छौं।
यस क्षेत्रमा जंगली बाँदरहरूले स्याउको खेत र अन्यमा आक्रमण गरे, र स्याउ खाने र यस्तै खानेकुराको क्षति बढ्दै गयो। त्यसोभए स्थानीय मानिसहरूले बाँदरलाई खुवाउन थाले जहाँ जिगोोकुदानी याएन-कोइन अवस्थित छ। नतिजा स्वरूप, बाँदरहरूले मैदानमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। पार्कको नजिकै त्यहाँ बाहिरी स्नान छ जहाँ मानिसहरू प्रवेश गर्छन्। बाँदरहरू नुहाउन आएका छन्। त्यसोभए, मानिस समस्यामा परेकोले, बाँदरहरूको लागि बाहिरी स्नान गृह निर्माण गरिएको थियो। Jigokudani Yaen-koen पर्यटकहरुलाई बाँदरहरुलाई खाना दिनबाट प्रतिबन्ध लगाउँछ। त्यसकारण, बाँदरहरू मानिसमा चासो राख्दैनन्। त्यसैले जादुई ठाउँ जहाँ मानव र बाँदरहरू सँगै मिलेर राखिन्छ।
Jigokudani Yaen-koen नागानो इलेक्ट्रिक रेलवे को Yudanaka स्टेशन बाट एक १० मिनेट ड्राइव को बारे मा छ। यद्यपि हिउँदमा जिगोकोदानी याएन कोइन जाने बाटो हिउँका कारण बन्द छ। त्यसैले जाडोमा पर्यटकहरूले कन्बायाशी ओन्सेनबाट 10० मिनेट जति हिड्नु पर्ने थियो। किनकी त्यो सडकमा हिउँ छ, तपाईं हिउँका जुत्ता जस्तै Nonslip जुत्ता लगाउन आवश्यक छ। जाडोमा पनि, साताको अन्त्य र वर्ष अन्त्य र नयाँ वर्ष छुट्टीहरू, सिधै बसहरू नजिकैको शिबु ओन्सेन र युडानका स्टेशनबाट सञ्चालित छन्। यस बसमा चढ्नको लागि, तपाईंले आरक्षण गर्नुपर्छ।
>> Jigokudani Yaen-koen को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> जाडो प्रत्यक्ष बसको लागि, कृपया यस पीडीएफमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
धेरै दुर्भाग्यवस, तपाईले इन्टरनेटमा आरक्षण गर्न सक्षम हुनुभएको छैन। तपाईले शिबू ओन्सेनमा एउटा टिकट किन्नु आवश्यक छ अघिल्लो दिन अथवा कल गर्नु भन्दा पहिले।
आगन्तुकहरूले अप्रिल २१, २०१ on मा जापानको नारामा जंगली हिरणहरू खुवाउँदछन्। नारा जापानको प्रमुख पर्यटन गन्तव्य हो - पूर्व व्यक्तित्व शहर र हाल युनेस्को विश्व सम्पदा साइट = शटरस्टक
जापानको नारा पार्कमा चार जना हिरणहरू लिइरहेकी एउटी युवती। वन्य sika एक प्राकृतिक स्मारक मानिन्छ = शटरस्टक
नारा पार्क को नक्शा
नारा पार्क नर शहरको बीचमा एक विशाल पार्क हो। करीव 1,200० हेक्टर क्षेत्रफलमा करीव १,२०० हिरणहरू बसोबास गर्दै टोडैजी मन्दिर, कोफुकुजी मन्दिर, कासुगा तैशा आदि लगायतका छन्। कडा शब्दमा भन्नुपर्दा यी हिरणहरू कासुगा तीर्थको स्वामित्वमा रहेको छ। कासुगा तैशा तीर्थमा, हिरणहरू सावधानीपूर्वक परमेश्वरको प्रयोगको रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। यदि तपाईं नारा जानुहुन्छ, तपाईं यी हिरणहरू भेट्न सक्नुहुन्छ।
हिरण एक धेरै सतर्क जनावर हो। यद्यपि नारामा मृगहरू धेरै समयदेखि नै मूल्यवान् भएका छन्, त्यसैले मानिसहरू विरुद्ध सतर्कता कम छ। यसको विपरित, हिरण भोजन खोज्ने मान्छेहरूको नजिक जान्छ। जब तपाई झुक्नु हुन्छ केही हियरहरू धनु पर्छ। उनीहरू सोच्दछन् कि तिनीहरूले झुके भने तिनीहरूले खाना पाउनेछन्।
हिरणको चारा नारा पार्कमा बेचिन्छ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया हिरणलाई पनि खुवाउने प्रयास गर्नुहोस्। आश्चर्यजनक रूपमा ठूलो संख्यामा मृगहरू तपाईंको नजिक आउछन्।
जापानको पुरानो राजधानी नारा शहरमा १,1,400०० जंगली हिरणहरू छन्। मृगहरू प्राइमभल जंगलमा बस्दछन्, तर दिनको समयमा नारा पार्क र सडकहरूमा हिड्दछन्। मृगलाई धेरै समयदेखि नै परमेश्वरको सन्देशवाहकका रूपमा लिइन्छ। यदि तपाईं नारा जानुहुन्छ, तपाईंलाई उत्साहित स्वागत गरिनेछ ...
ओकुनो टापुमा अगाडि हेर्दै बजारमा बसिरहेको एक खरायो
Okunoshima टापु को नक्शा
Okunoshima टापु एक सानो टापु हो जुन हिरोशिमा प्रान्तको दक्षिणमा र4किलोमिटर वरपर स्थित छ। यो १ad मिनेटको डुry्गा सवारी छ ताडनौमी पोर्टबाट, जेआर टाडानोमि स्टेशनबाट-मिनेट पैदल। Okunoshima टापुमा लगभग 15 जंगली खरायोहरू छन्। यो भनिन्छ कि खरायो ज element्गली जान अघि प्राथमिक स्कूलहरु मा राखिएको थियो।
हाल, लगभग कुनै पनि व्यक्ति Okunoshima टापुमा बस्दैनन्। यस टापुमा "Kyukamura" भनिने सार्वजनिक रिसोर्ट सुविधा छ। टापुका बासिन्दाहरू यस सुविधाका कर्मचारीहरूको बारेमा छन्।
जंगली खरायोहरू नजिकै छन् जब तपाईं फेरीबाट उत्रिनुभयो। के म सिफारिस गर्दछु विशेष गरी क्युकुमुराको प्रवेशद्वार नजिकको लन खुला ठाउँ। यहाँ धेरै खरायोहरू छन्। क्युकामुरामा, तपाईं फेरी प्लेटफर्मबाट निःशुल्क बस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Okunoshima टापुमा, सामान्य कारहरू पार गर्न निषेध गरिएको छ, त्यसैले तपाईं यो बस राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्छ।
खरायो मानिसबाट धेरै सतर्क हुँदैनन्। टापुमा आउनु भन्दा पहिले तपाईंले खाना पकाउनु पर्छ जस्तै गाजर र बन्दकोबीहरू। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई खरायोमा हुर्काउनुभयो भने, तपाईंको वरिपरि धेरै ससुरहरू नजिक आउँछन्।
तपाईं क्युकामुरामा बस्न सक्नुहुन्छ। क्युकामुरामा तातो वसन्त छ। क्युकामुराको रेस्टुरेन्ट (यस टापुको एक मात्र रेस्टुरेन्ट!) र भाडा साइकल प्रयोग गरौं।
>> Okunoshima टापुका विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
>> क्यूकामुराको आधिकारिक साइट यहाँ छ
ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियमको नक्शा
ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियम ओकिनावा मुख्य टापुको उत्तर-पश्चिमी भागमा धेरै ठूलो एक्वैरियम हो र ओकिनावाको प्रमुख दर्शनीय स्थलमध्ये एक भएको छ। यस एक्वेरियममा सबैभन्दा ठूलो पानी ट्या tank्क meters 35 मिटर लामो, २ 27 मिटर चौडा, १० मिटर गहिरो छ। यस पानी ट्या tank्कीमा व्हेल शार्क (कुल लम्बाई 10..8.7 मीटर) र मन्त्रा इत्यादि छन्। सबैमा all 77 वटा पानी ट्या water्की छन्।
म यो एक्वेरियममा छु। म प्रवेश गर्दा म धेरै छक्क थियो। यस्तो ठूलो एक्वेरियम संसारमा खासै छैन। विशाल पानी ट्या tank्कीमा, समुद्रको भव्य परिदृश्य फैलदैछ। कोरल पनि सुन्दर छन्। तपाईं यस तथ्यबाट प्रभावित हुनुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै प्रकारका जीवित प्राणीहरू छन्।
एक्वेरियमको छेउमा त्यहाँ डल्फिन, म्यानेट र समुद्री कछुए जस्ता सुविधाहरू छन्। यी आगन्तुकहरूका बीच पनि धेरै लोकप्रिय छन्।
>> ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियमको आधिकारिक साइट यहाँ छ
"रुचिहरु" मा फर्कनुहोस्
समुराई र निन्जा अनुभव! जापानमा Best उत्तम सिफारिश गरिएका ठाउँहरू
नागानो प्रान्त: सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र केहि चीजहरू
नारा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
फोटोहरू: याकुशिमा टापु - "राजकुमारी मोनोनोक" को टापु अन्वेषण गर्नुहोस्!
सिफारिश गरिएको जापानी स्थानीय साइट! मध्य जापान (Chubu)
फोटो: नारा - जापानको पुरानो राजधानी